ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် ထိပ်သီး ၁၄ ဦး နေပြည်တော် မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
Phoe Kwar :
why only invite shan? how about chin, kachin, karen etc...they invite shan bcs shan is buddist state? don call top party leaders....
Nov 01, 2014 09:35 AM
လုပ် သလို မ ဖြစ် တော့ ဖြစ် သလို လုပ် တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပါ
အနှစ် ၆ဝ ကျော်နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းဖြစ်နေတာကို တယောက် ၁၀ မိနစ်ပြော ဖို အချိန်ရ တယ်။ ရလဒ်က ဘာမှမဖြစ်ဘူး
Nov 01, 2014 04:11 AM
Peace နေရပ်- London :
Good news. Hopefully it was not justasugar-coated move just before the visit of Obama.
they do not represent other minorities.....dont call them top leaders..bullshit
Oct 31, 2014 01:14 PM